Ukumaketha nge-SMS kanye Nezinzuzo Zakho Ezimangazayo | Martech Zone
Ukumaketha nge-SMS kanye Nezinzuzo Zayo Ezimangalisayo
NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 12, i-2019 NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 12, i-2019 UBarrack Diego
I-SMS (uhlelo lwemiyalezo emifushane) ngokuyisisekelo elinye igama le- imiyalezo. Futhi, iningi labaninimabhizinisi alazi kepha ukuthumela imiyalezo kubaluleke ngokufanayo kwezinye izindlela zokumaketha njengokumaketha imithombo yezokuxhumana noma ukumaketha usebenzisa izincwajana. Izinzuzo ezihambisana nokumaketha kwe-SMS zinomthwalo wokwenza kube ngenye yezinketho ezinhle kakhulu zezinhlobo ezahlukahlukene zamabhizinisi, abheke phambili ukufinyelela kumakhasimende amaningi.
I-SMS yaziwa njengesilinganiso esivulekile sama-98%.
Uma usanda kuqala ibhizinisi lakho futhi ubhekene nemikhawulo eminingi, kusobala ukuthi ukunweba izinsiza kungenye yezinto ezibaluleke kakhulu onazo. Udinga ukukhipha ukuthengisa ngakunye ongakwenza ngenkathi ulinganisa ukuthengisa kanye nesabelomali sokumaketha kule nqubo. Kuzoba ngenye yezindlela zokuhweba ezikhohlisayo kakhulu ukuthola ibhalansi futhi kuzokuza nezinye izinto eziningi, njengesikhathi esisetshenzisiwe, ulwazi lobuchwepheshe, nokuthi kufanele lusetshenziswe kanjani.
Kungumqondo omuhle ukusebenzisana namafemu wokumaketha ama-SMS ukuze kwenziwe amasu afanele. Kunezinzuzo eziningi ezingeziwe zokusebenzisa imiyalezo yenkampani ngayinye. Okunikezwe ngezansi kunohlu lwezinzuzo ezimangazayo ezihambisana nokumaketha kwe-SMS.
Ukumakethwa kwe-SMS Kwandisa Ukuzibandakanya Kwamakhasimende
Kunombono oyiphutha omkhulu wokuthi imiyalezo isetshenziselwa ukukhumbuza amakhasimende ngokuthile ngokuthumela amakhodi esaphulelo noma amavawusha. Kodwa-ke, udinga ukwazi ukuthi imilayezo ye-SMS efike ngesikhathi izokwenza umsebenzi omuhle wokubandakanya amakhasimende ngezindlela ezikhangayo, ngokuqhathanisa nokumaketha kwemidiya yezenhlalo ngokukhangisa nge-imeyili. Kusukela ekunikezeni amakhasimende okuqukethwe kwemidiya okumangazayo njengamakhadi okuqala, okukhethiwe okwenziwe ngezifiso, kanye nemidlalo, imiyalezo, kuyakwazi ukwenza umthelela wemvelo.
Azikwazi ukusiza kuphela ekwandiseni izinga lokuzibandakanya kepha futhi ziyasiza ekukhuliseni ukuqwashisa ngomkhiqizo kanye nangendlela yokudluliswa komlomo.
Uzoyidelela uma uchitha amahora amaningi wenza i-imeyili ekahle bese uthola ukuthi iya ngqo ebhokisini logaxekile lamakhasimende. Noma kulandelwe imikhuba emihle yokuvika ifolda yogaxekile, ukuhanjiswa okuyi-100% akukaze kuqinisekiswe. Kuzoba nzima lapho kubhekwa ukuxhumana kwezamabhizinisi nokuxhumana. Amabhizinisi, kanye nezinkampani ezinkulu, bazoba namasango ayimbumbulu ama-imeyili, kanye nezokuphepha ezinwetshiwe. Yilokhu okubhekele ukwenza i-SMS enye yeziteshi ezinhle kakhulu zokuxhumana namakhasimende.
Okunikezwe ngezansi kunohlu lwamathiphu azoqinisekisa ukuthi imilayezo yombhalo izofinyelela endaweni efanele.
Ungazisebenzisi ngokweqile izimpawu zokubabaza noma ofeleba.
Qinisekisa ukuthi wenza okungahleliwe kokuqukethwe noma kungenjalo opharetha bangavimba imilayezo ephindaphindwayo.
Qiniseka ukuthi uvikela amagama abucayi.
I-SMS ineZinga Eliphezulu Elivulekile kunama-imeyili
Inzuzo enkulu ehambisana nokumaketha kwe-SMS ukuthi amakhasimende azovula imilayezo ngokushesha nje lapho eyithola. Lokhu kubhekele ukuhlinzeka ngemiyalezo enamanani avulekile angcono uma kuqhathaniswa nezinye izinketho zokukhangisa. Kulula nge-imeyili ukuthi ilahleke kalula kumafolda ogaxekile.
Kepha ngokuthumela imiyalezo kudume, ukumakethwa kombhalo kuyinto engeke izitshwe indiva. Izikhathi eziningi, ikhasimende nakanjani lizovula umbhalo othile bese lifunda okuqukethwe. Uma ufuna indlela yokufinyelela kumakhasimende akho amanje nabangase babe khona ngendlela ehambisanayo, kuzofanela uzame imibhalo. Ukuze Funda kabanzi, ungachofoza lapha.
Ukumakethwa kwe-SMS kuyasebenziseka
Ngeke kuthathe imali eningi ukuze kuthunyelwe imibhalo kumakhasimende. Kushibhile kakhulu uma kuqhathaniswa nezinye izindlela zokumaketha njengokuthenga izikhangiso ze-Facebook. Lokhu kuzokwenza ukumaketha kwe-SMS kube enye yezinketho ezinhle kumabhizinisi, kungakhathalekile ukuthi hlobo luni lwawo. Futhi, amabhizinisi asanda kuqala angasebenzisa ukumaketha kwe-SMS ngaphandle kokuchitha imali eningi kwezinye izindlela zokumaketha. Kungcono kakhulu uma kuqhathaniswa nezindlela zokuthengisa zendabuko.
Ukumaketha kwe-SMS Kuletha Okukhethekile
Umbhalisi womyalezo wombhalo ukunikeze ukufinyelela kwezwe lakhe langasese, kanye nenombolo yeselula, enamandla nakanjani futhi ethwala umthwalo omkhulu wemfanelo. Kungumsebenzi wakho ukuqinisekisa ukuthi bazizwa benelungelo futhi bekhethekile. Njengebhizinisi lokuqalisa, udinga ukuguquguquka futhi ube nokuqonda okufanele kwekhasimende ngalinye futhi ube nekhono lokwenza umyalezo ofanele ukuze uvumelane nesisekelo samakhasimende.
Ama-Competes Wokumaketha nge-SMS Anama-Medium Anzima Kakhulu Nama-Medium
Ukuthumela imiyalezo akubandakanyi izithombe ezihehayo noma ukwakheka okubizayo. Akudingeki nokuthi ukhokhe imali eningi ngokwenza isibambiso. Konke okudingayo ukusetshenziswa kahle kwamagama, okwazi ukudala izinga lazo zonke izinhlobo zezimbangi kanye nemikhankaso. Ngokusetshenziswa kwamagama afanele, uzokwazi ukuthatha umkhankaso wokuthumela imiyalezo ezingeni elisha lonke.
Imiphumela Yezokumaketha nge-SMS ishesha khona
Umlayezo wombhalo nakanjani uyisiteshi esisheshayo futhi njengomkhiqizo, ungaqinisekisa ukuthi nemiyalezo ebucayi izofundwa cishe ngokushesha. Lokhu kuzosiza imikhiqizo ukuthi iqhubeke nokuthumela imiyalezo, ebucayi ngesikhathi, njengamadili omzuzu wokugcina, ukukhushulwa okuhlobene nemicimbi, ukuthengiswa kwe-flash, nemikhonzo yeholide. I-SMS iyashesha njengokukhanyisa futhi ayikho into esheshayo njengokuqhathaniswa nomlayezo wombhalo.
Kufanele uqinisekise ukuthi imilayezo yombhalo imifushane futhi icacile. Dlula kuzo zonke izinzuzo ezibalwe ngenhla ukuze uqinisekise ukuthi imiyalezo ebhaliwe ingenye yezingxenye ezibaluleke kakhulu zamasu wokumaketha osuvele unawo.
Tags: ikhodi yomyalezo omfushaneimiyalezo ye-smsamathiphu we-smsukumaketha imiyalezoukuthumela imiyalezo
UBarrack Diego uyi-blogger enolwazi obhale izindatshana zamabhulogi namawebhusayithi amaningana ngokusetshenziswa okuhlukahlukene kwemithombo yezokuxhumana ukwenza ithrafikhi yamabhizinisi amaningi kumawebhusayithi webhizinisi.
Misa Izinkampani Ezihlazisayo Ezikhokhela Ibheyili Kwezokuxhumana Komphakathi kanye Nokumaketha Okuqukethwe